जग्गाधनीले डेढ दशकमा पनि पाएनन् मुआब्जा
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका जग्गाधनीले सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा डेढ दशकसम्म पनि पाउन सकेका छैनन् । बरु उल्टै सडकले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो तिर्दै आएका छन् । भोगचलन नै गर्न नपाएको जग्गाको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका छन्...
बिरुवा उत्पादन गर्न रू. २६ करोड सहयोग
तनहुँ । जिल्लाको ऋषिङगाउँपालिका–१ झापुटारस्थित निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत् परियोजनाले बिरुवा उत्पादन गर्न डिभिजन वन कार्यालयलाई रू. २६ करोड सहयोग गरेको छ । करीब ४१७ हेक्टर वनक्षेत्र सो परियोजनाको जलाशयले डुबानमा पर्ने र १ लाख ८१ हजार बिरुवा कटानी गर्नुपर्ने बताइएको छ । परियोजनाले त्यसबापतको क...
सडक सञ्जालसँग जोडियो मुदी गाउँ
म्याग्दी । म्याग्दीको अत्यन्त दुर्गम मुदी गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । धवलागिरि गाउँपालिका–४ को मुदी गाउँमा सडक जोडिएसँगै यहाँका स्थानीय खुशी भएका छन् । भीर र जंगलबाट सधैं जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य यहाँका स्थानीय अब आरामदायी र सहज यात्राको आशामा खुशीले पुरकित भएका हुन् । सडकमा गाडी गुड...
कागले सखाप पार्‍यो मकैबाली
म्याग्दी (अस) । म्याग्दीमा पाक्न लागेको मकैबाली कागले सखाप पारेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले लगाएको मकैबाली कागले सखाप पार्न थालेपछि यहाँका किसान चिन्तित बनेका छन् । जिल्लाको बेनी नगरपालिका–२ डाँडाखेत र अम्बोट लगायत क्षेत्रमा पाक्नै लागेको मकै तथा सिमीलगायत तरकारी बालीसमेत कागले सखाप पार्न...
गण्डकीका सात जिल्लामा थप ५८ जनामा संक्रमण, संक्रमितको संख्या ४३८ पुग्यो
असार ६, कास्की । गण्डकी प्रदेशका कास्की, तनहुँ, नवलपुर, गोरखा, म्याग्दी, स्याङ्जा र बागलुङमा गरी शनिवार ५८ जना नयाँ कोभिड–१९ संक्रमित थपिएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जारी गरेको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणमा कास्कीमा दुई, तनहुँमा २५, नवलपुरमा १६, गोरखामा पाँच, बाग्लुङमा आ...
गण्डकी प्रदेशमा थपिए २४ जना कोरोना संक्रमित
असार ५, कास्की । गण्डकी प्रदेशका कास्की, नवलपरासी(बर्दघाट सुस्ता पूर्व), बाग्लुङ र स्याङ्जामा गरी शुक्रवार २४ जना नयाँ कोभिड–१९ संंक्रमित थपिएका छन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले जारी गरेको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक...
आइसोलेसन वार्ड भरिएपछि संक्रमितलाई मेडिकल वार्डमै राखिँदै
कास्की । गण्डकी प्रदेशको कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्ड भरिएपछि विकल्पको रूपमा अस्पतालकै मेडिकल वार्ड प्रयोग गरिने भएको छ । प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीवरूपमा बढेपछि अस्पताल प्रशासनले बाध्य भएर मेडिकल वार्ड हटाएर कोरोना संक्रमितका लागि २...
हिमालपारिको जिल्लामा पनि पुग्यो कोरोना
असार ४, मनाङ । हिमालपारिको जिल्लामा पहिलोपटक एक जनामा कोरोना देखिएको छ । कपिलवस्तुको बाणगङ्गा–१४ स्थायी ठेगाना भई मनाङस्थित चामे गाउँपालिकामा कार्यरत ५७ वर्षीय कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । उनी कपिलवस्तुबाट मनाङ फर्किएका थिए । उनलाई मनाङ प्रवेश गरेदेखि नै चामे गाउँपालिकाको...
पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–३ पुर्कोटका पूर्णबहादुर परियार लामो लकडाउनले समस्यामा थिए । दिनभरि काम गरी बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने बाध्यता भएका उनी लकडाउन कारण निकै निराश थिए । तर, पछिल्लो एक सातादेखि उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारीमा जोडिने मौका पाएका छन् । ‘दिनभ...
महिलालाई राख्न छुट्टै क्वारेन्टाइन बनाउँदै पोखरा महागनर
असार ३, कास्की । पोखरा महागनरपालिकाले महिलाको लागिमात्रै छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ । महानगरले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको बुद्ध हस्पिटललाई महिलाहरुका लागि क्वारेन्टाइन बनाएको हो । नेपालभन्दा बाहिरबाट आउने महिलाहरुलाई राख्न महानगरले पोखराका विभिन्न स्थानमा आवस्यक ठाउ...